Mafuta Pombi Assy
Power Steering Pombi
NITOYO yaimbova timu diki yaive nevanhu vashanu muna 2000, iri muChengdu, Sichuan.Mushure mekuedza kwedu, iko zvino yakagadzirika kuita chikuva chimwechete chekumisa mota sevhisi vanhu vanopfuura makumi matanhatu, yakabatana nenyika / matunhu zana nemakumi masere uye yakashandira vatengi vanopfuura mazana mana.
Kubva 2000 ~
Muna 2000, timu yedu yekutanga yakatanga bhizinesi rekutengesa kunze kwenyika neakawanda akafaya kushanya nekuferefeta angangoita mafekitori ese eChina, uye akawana mafekitori akakodzera.
2000-2005 Kuwedzera Kwese muSouth America Musika
Mushure mekuedza kwakawanda uye shanduko takakwanisa kuwana kuvimba kwevatengi mumusika weSouth America kunyanya muParaguay.
2000-2010 Kuzvarwa Kwemhando Yedu NITOYO&UBZ
Kuburikidza nekuedza kwemakore gumi isu tinozivikanwa seNITOYO & UBZ pasi rese, vatengi vazhinji vanovimba nemhando yeNITOYO uye sevhisi.Uyezve, sekuratidzira kwelogo yedu, takazvipira kupa zvigadzirwa zvikuru kuchengetedza kutyaira kwako.Kubva pane izvi, tine masangano munyika dzakawanda semuenzaniso muParaguay, Madagascar.
2011 Diversified Development
Nekuvandudzwa kweinternet, tinotanga kuwedzera papuratifomu papuratifomu inosanganisira Alibaba international station store uye yedu pachedu webhusaiti yepamutemo https://nitoyoauto.com/, facebook, linked-in, youtube.
2012-2019 Kukura Kwepasi Pose
Nekuda kwenzira yataigadzira kare, tinowedzera zvishoma nezvishoma misika yakawanda uye yakakurumbira muAfrica, South America, Middle East, uye Southeast Asia Market.
Muna 2013 takabudirira kugamuchirwa nemusika weAfrica uye takawana maodha aikosha 1,000,000 USD.
Muna 2015 takafara kuva uya aivimbwa neshamwari dzakawanda dzeSoutheast Asia.
Muna 2017 takaenda kuLatin Expo neAmerica Aapex pakati paChikunguru naNovember.Mugore rino tinowana mukurumbira wedu mumisika miviri iyi sekuratidzwa kwemirairo yedu-1,500,000 USD.
Muna 2018-2019 takaenda kukuratidzira kwakawanda, kwakatumirwa kunyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu.
2021 NITOYO Anosvitsa makore makumi maviri nerimwe
Kariro dzokukura dzeboka racho dzakaisvonaka.Kubva 2000, isu takachengeta chinangwa chedu chepakutanga: kuve nechokwadi chekuti vatengi vanogona kutenga nechivimbo uye vatengi vanogona kushandisa nechivimbo!
Nekubvunza Nezve Zvigadzirwa Zvedu Kana Pricelist, Ndokumbira Tisiye Imeyili Yako Kwatiri Uye Isu Tichange Tichibata Mukati 24 Maawa.